Sida loo sawiro xayawaano talaabo talaabo ah oo sahal ah xeeladahan | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo sawiro xayawaanka
Encarni Arcoya | | La cusboonaysiiyay 03/02/2021 20:56 | Dhiirrigelinta
Sawir qaadistu ma adka. Laakiin ha qaldamin; si fiican u sawirashada sidoo kale ma fududa Waxaa jira kuwa leh 'farshaxan' badan iyo kuwa si fiican u sameeya. Xaaladdan oo kale, labadaba qaabka iyo jacaylka kugu riixaya inaad abuurto sawirro saameyn ku leh. Mid ka mid ah kuwa ugu horreeya, iyo sidoo kale midka ugu fudud ee "tababar" leh waa barashada sida loo sawiro xayawaanka. Sababta ayaa ah in ku dhowaad dhammaantood ay leeyihiin qaabab aasaasi ah oo, marka la aqoonsado, aad leedahay in ka badan kalabar sawirka la qabtay
Haddii aad rabto baro sida loo sawiro xayawaanka, Sababtoo ah waad jeceshahay, maxaa yeelay waxaad leedahay carruur yaryar oo ku weydiiya sida loo sawiro oo aadan rabin inaad ku guul darreysato, ama aad si fudud u barato cusub, maanta waxaan kaa caawin doonnaa inaad ogaato waxa ay tahay tallaabooyinka ay tahay inaad qaado ku guuleysto. Waxaa laga yaabaa in sawirada ugu horreeya aysan si fiican u noqon doonin, laakiin adkeysi, dulqaad iyo wixii ka sarreysa oo dhan waxay kaa dhigi doontaa sayid sawir xayawaan.
1 Furayaasha ogaanshaha sida loo sawiro xayawaanka
2 Sida loo sawiro xayawaanka talaabo talaabo leh qaababka joomatari
2.1 Ka bilow madaxa
2.2 Sawir jirka
2.3 Ku soo biir madaxa iyo jirka
2.4 Diirada saar madaxa
2.5 Lugaha ku dar
2.6 Tirtir wareegyada iyo leydilada
3 Sida loo sawiro xayawaanka: wajiyada
4 Sida loo sawiro xayawaanka waaqiciga ah
5 Sida looga baxo sawirada xoolaha ee aasaasiga ah loona gudbo hyperrealistic
Furayaasha ogaanshaha sida loo sawiro xayawaanka
Sidii aan hore kuugu sheegnayba, ogaanshaha sida loo sawiro xayawaanka ayaa mara cadee waa maxay qaababka aasaasiga ah ee kuwani. Waana taas, haddii aad u fiirsato xayawaanka, waxay ku xusuusin karaan qaababka joomatari. Tusaale ahaan, madaxa bisadu wuxuu noqon karaa meerto; jirka, oval; dabaduna waa leydi dherer ah. Qaababkan xaddidan, waxaad ku abuuri kartaa xariiqyo qeexaya jirka xayawaanka sida oo kale. Oo sidaas, hel natiijo.
Sida laga soo xigtay Pierre Pochet, "Sida jidhka bini'aadamka, jidhka xayawaannada badankood waxaa loo jajabin karaa qaabab fudud". Oo maxay yihiin qaababkaasi? Hagaag, tan ugu aasaasiga ah: laba jibbaaran, saddexagal, goobaabin iyo leydi. Mararka qaarkood wareeg oval ah ayaa sidoo kale geli lahaa.
Halkan waxaan kaaga tageynaa qaar ka mid ah sawirrada xayawaanka ee lagu sameeyay qaababka joomatari inuu kaa siiyo fikrad sida ay tahay. Waana taas, sida qof, waxay sidoo kale nala wadaagaan siyaabaha loo sawiro.
Furaha kale ee ay tahay inaad tixgeliso si aad u sawirto ayaa ah inaad tixraac leedahay. Marka ay timaado sawir qaadista xayawaanka, kuwan waxaa loo samayn karaa siyaabo aad u kala geddisan, laakiin markii ugu horraysay ee aad wajihi karto sawir, waxaad u baahan tahay inaad haysato tixraac ku saabsan sida aad doonaysid inuu sawirku u noqdo. Tan ku dhahnayno inaad nuqul ka samaynayso mid hore loo sameeyay, laakiin waxaan u aragnaa inay aasaas u tahay inaad ogaato waxa ay tahay inaad ku dhejiso sawirka si ay runtii ugu muuqato xayawaanka aad rabto.
Sida loo sawiro xayawaanka talaabo talaabo leh qaababka joomatari
Qiyaas inaad u sawirto eey, bisad, sac ... Laakiin ma taqaanid sida loo sameeyo. Si kastaba ha noqotee, maskaxdaada waxaa hubaal ah inaad leedahay sawirka; dhibaatadu waa in lagu soo saaro warqad. Marka waa kuwan tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo:
Ka bilow madaxa
Si tan loo sameeyo, sawir goobaabin. Tani waa inay ahaataa cabirka aad rabto inuu sawirku noqdo. Maskaxda ku hay in ay ka sii weynaan karto haddii xayawaanka aad sawiraysaa uu weyn yahay. Ku dhis cabbirka "dhabta ah" ee xayawaanka. Tusaale ahaan, haddii aad sawireyso maroodiga, goobaabintu wey ka weynaan doontaa haddii aad jiir sawireyso.
Marka xigta, waxaad u baahan doontaa jirka. Tan waxaa badanaa lagu sameeyaa leydi, in kasta oo ay jiraan geesaha wareegsan (waa sida wareegsan fidsan).
Ku soo biir madaxa iyo jirka
Haddii aadan ku rinjiyeeyn leydiinka xiga wareega, waxaa lagama maarmaan noqon doonta inaad ku soo biirto xariiqyo u ekeysiinaya qaabka ama dhogorta xayawaanka. Tani way fududahay maxaa yeelay uma baahnid inaad 'ka dhigto wax fiican', kaliya isku dheji labada qaab ee marka hore.
Diirada saar madaxa
Sawir masarka, jirridda, sanka, dhegaha ... Taasi waa, astaamaha ugu badan ee xayawaanka aad dooratay. Laakiin iska ilaali inaad faahfaahin dheeraad ah bixiso, keydso kuwa ugu dambeeya.
Lugaha ku dar
Kuwa hore ka horraysii kuwa dambe. Marka, kuwan hore waxay u adeegi doonaan tixraac si looga dhigo kuwa gadaal (maxaa yeelay yeelashada qaybta madaxa way fududahay in la ogaado inta ay le'eg yihiin iyo ballaca ay ahaan doonaan.
Tirtir wareegyada iyo leydilada
Hadda oo aad haysatid saldhigga, waad sii wadi kartaa dhammaynta sawirka, taasna waxay tusinaysaa sawiridda «kaabeyaasha», ha noqoto dabada, dhogorta, indhaha ...
Sida loo sawiro xayawaanka: wajiyada
Barashada sida loo sawiro wejiyada xayawaanka ayaa ah, shaki la’aan, kan ugu fudud, gaar ahaan kuwa yaryar. Taasina waa in ficil ahaan xayawaannada oo dhan lagu sawiri karo qaaciidooyinka joomatari, hadday ahaan lahayd wareeg, laba jibbaaran, saddexagal
U qaadashada saldhig ahaan, waxaad dhisi kartaa qaabab kala duwan. Waxaan kuu daynaynaa tusaalooyin.
Talaabooyinka lagu sawirayo wejiga xoolaha oo leh qaabab joomatari
Waxaan hoosta ka sharaxeynaa sida loo sawiro xayawaanka, gaar ahaan wajiyada, markaa waad arki kartaa inay tahay waxa ugu fudud ee lagu guuleysan karo:
Marka hore, sawir wareeg ama laba jibbaaran.
Bannaanka taas, dhig laba oval oo noqon doona dhegaha xayawaanka. Waxay kuxirantahay waxaad xidhatay, dhagahaasi way weynaan doonaan ama way yaraanayaan.
Samee qaanso sida aad u kala qeybineyso nus wareega ama laba jibbaara nuska. Khadadkaas ka hooseeya goobaabin yar. Taasi waxay noqon doontaa sanka xayawaankaaga. Xagga qaanso-dheer, dhig indhaha xayawaanka.
Hada waa inaad afka uun galisaa.
Waxay kuxirantahay xayawaanka aad dooratay, talaabooyinkani waxay noqon doonaan kuwa dhaadheer ama ka gaaban, maadaama mar hadaad salka heysato aad ubaahantahay inaad diirada saarto faahfaahinta si aad u siiso qaabka aad rabto inaad ku gaarto.
Sida loo sawiro xayawaanka waaqiciga ah
Markaad baraneyso inaad sawirto xayawaanka waaqiciga ah, waa inaad maanka ku haysaa in inta ay kor ku xusan kaa caawin karaan, ay haddana tahay "aasaas", sawirada dhabta ahna waxay u baahan yihiin in hore loo sii socdo Xaaladdan oo kale, maahan wax badan qaababka aasaasiga ah ee ay tahay inaad hagaajiso, laakiin anatomy ee xayawaanka.
Tusaale ahaan, haddii waxa aad rabto ay tahay inaad sawirto eey macquul ah, waa inaad ogaataa sida ay tahay kahor. Ma ogtahay inay leedahay 321 lafood? Iyo in jidhkaagu u qaybsan yahay saddex qaybood, mid walibana leh astaamo u gaar ah?
Gaar ahaan, waa inaad fiirisaa:
Madaxa, taas oo ku kala duwanaan doonta iyada oo ku xidhan tartanka aad dooratay inaad sawirto. Dhexdeeda waa inaad xoogga saartaa
Jirka, kaliya ma ahan waxa dhabarka, burka iyo dabada, laakiin sidoo kale qeybta qoorta.
Xagjirnimada, hore iyo dambe.
Sida looga baxo sawirada xoolaha ee aasaasiga ah loona gudbo hyperrealistic
Waa lama huraan inaad jacayl la gasho sawirro u muuqda inay nolosha ku soo socdaan, kuwaas oo waaqici ah oo xitaa u ekaan kara sawirro dhab ah. Laakiin si loo gaadho halkaas, waxay u baahan tahay waxqabad badan. Marka haddii ujeeddadaadu tahay inaad ku guuleysato natiijooyinkan, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartaa waa ku dhaqan iyo waxbarasho adag.
Dhamaan fanaaniintu waxay bilaabeen inay waxyaabo kale qabtaan. Xaaladdan, waad awoodi kartaa baro sida loo sawiro xayawaanka aasaasiga ah waayo, sidaad u baratay farsamada, dhibka sii kordhi Ilaa intaad ka helayso waxa aad raadineyso, sawiradaas dhabta ah ee qof walba cajabin kara.
Kuwani waxay ku saleysan yihiin faahfaahinta xayawaan kasta, si ay ugu keenaan "nolol" sawirkaas. Laakiin, taas, waxaa lagama maarmaan ah inaad marka hore barato aasaasiga si aad u horumariso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sida loo sawiro xayawaanka
Instagram waxay isku dayeysaa Sheekooyinka toosan si ay mar kale dib isugu soo noqoto
Muranka iyo xaqiiqda farshaxanka Medusa ee ah halka dheddigga aan lagu galmoodin